Bambalwa abantu bazi, kodwa ukhokho Suv "Volkswagen Tiguan" 2013 kwaba kancane imoto "Golf" amancane. Ngo-1990, onjiniyela German ziye zasungula ukuguqulwa "Izwe" kulo hatchback ezisemadolobheni. Kuleli imodeli onjiniyela ukubeka uhlaka Spar, ungeze "razdatkoy" futhi coupling viscous. Kodwa naphezu kwale mizamo arsenal off-road, lokhu ukuguqulwa akuyona kwakuqala ukwanda okukhulu, futhi 1992 ukukhiqizwa serial "Golf Izwe" laba lincane. Eminyakeni embalwa kamuva, ngo-2007, amaJalimane wanquma ngivuselele ukuguqulwa kuhlulekile, kodwa ebe ethi entsha. Ngakho Weza isizukulwane sokuqala izimoto "Volkswagen Tiguan". Ukucaciswa kobuchwepheshe kanye nomklamo walesi Suv kakhulu lihlukaniswe ukhokho, kodwa namanje kukhona enifana kukhona phakathi kwabo. Kulesi sihloko sizohlola zonke izici imodeli, "Tiguan" futhi ukuthola ukuthi kungani emisha usuthandwa ngakho e-Europe.
Lapho ubuka design crossover akuyona ncamashi inhlangano nge "igalofu", nakuba isizukulwane lokugcina hatchbacks has a front end efanayo. Ukuchaza lesi simo kungaba silula - amaJalimane abanamathela nesitayela sabo yenkampani, ngakho konke imishini yabo babe "ubuso" efanayo. Ngokuqondene naye, "Tiguan", libonakala ngempela obunobunye futhi kubonakala ngempela zanamuhla. Kukhona phambi bumper enkulu nge ububanzi air eyanele, phezu kwawo isendaweni-chrome Izinsimbi nge isibonakaliso esikhulu eqenjini. Lights ukukhanya main uhlangane kahle nge isakhiwo ngehele futhi kancane ungenisa phezu kwamaphiko. Side ungabona ububanzi isondo yayinamakhothamo, izibuko umzimba-ezinemibala. By the way, bakwazi ukubhekana isignali baphendukela LED. Ngokuvamile, ingaphandle Suv kwenzakala yimpumelelo kakhulu - noma yini enganikeza umuzwa lemininingwane engadingekile.
"Volkswagen Tiguan" - Ukucaciswa
imoto ifakwe amandla amayunithi ezimbili emakethe Russian. Phakathi kwabo kuyinto likaphethiloli-1.4 litre iyunithi, elisebenza esihambisana six-speed "Mechanics". Lokhu injini luyisisekelo crossover 'Volkswagen Tiguan ". izici Kobuchwepheshe motor yesibili (turbo diesel) okuthuthukile. Le yunithi amabili-litre buthola "amakhulukhulu" ngemizuzwana engaphansi kuka-10. Kodwa futhi motor sokuqala futhi okuhle ngempela. Ubizwa uhola ngokwemibandela kahle - ngokwesilinganiso ibusa mayelana 7 amalitha uphethiloli ngayinye amakhilomitha angu-100. Kodwa futhi mayelana amaJalimane kwemvelo ungakhohlwa. Euro 4 - ukuthi le ndinganiso oluhambisana isizukulwane sokuqala crossovers "Volkswagen Tiguan". Ukucaciswa, njengoba sesibonile, kuyatuseka kakhulu lokho ngempela. Kodwa lapha ayibizi kanjani imoto abashayeli bethu?
"Volkswagen Tiguan" - ukumisa kanye nentengo
ERussia, eziningana amasethi ephelele Suv, kuhlanganise "Ezemidlalo Ukuphela Style", ifakwe injini-1.4 litre (kuwufanele ruble ecishe ibe yizinkulungwane 900). Ukuze imishini udizili kuyodingeka bakhokhe ruble mayelana 1 million 53 eyinkulungwane. Manje kuba sobala ukuthi abashayeli uthande lokhu Suv. idizayini enhle, kakhulu izici lobuchwepheshe kanye ngemali ephansi - lokho imfihlo yempumelelo "Volkswagen Tiguan".
Ukulandwa "Ford" ngeke babhekane ngokuphumelelayo nanoma yiluphi umsebenzi!
Zonke-wheel drive crossovers: sohlelo izimoto Ukucaciswa
Simple futhi exotic kakolweni iphalishi ubisi